Kedu ihe bụ satellite? Ozi Nkụzi na Satellite Technology
Echiche ndị dị na satellite
Kedu ihe Satellite?
Ajụjụ Mbụ maka Satellites
Kedu ka Satellite si ebili? Igwe okwu redio Satellite na-esi na nchọpụta na mpaghara nke nkwukọrịta, iji nweta ọganihu dị ukwuu n'iji arụ ọrụ na ọnụ ala kachasị dị ala.
Ụfọdụ ọrụ na satellites? Na usoro telivishọn nke satellite, na njikọ dị anya, ha nwekwara ikike ịchọta ma ọ bụ mgbasa ozi sitere na ma ọ bụ n'ebe dịgasị iche kama ịkwasa site n'otu ebe gaa na ọzọ.
Kedu ihe bụ satọnite na olee otu o si arụ ọrụ? Ọ bụ igwe ntanetị nke dị na mbara igwe, na-enweta nrịbama nke emepụtara n'ụwa, na-eme ka ha dị elu ma na-eziga ha n'ụwa. Ọ na-arụkwa ọrụ n'ihi na onye redio na-amakarị "A" na-emetụ ihe mgbaàmà nke satellite na-enweta. Satellite na-eme ka ọ dị elu ma na-akpọghachite ya ozugbo. Onye ọrụ redio redio "B" natara ya ma zaa ya. Ya mere, malite nkwurịta okwu satellite.
Kedu ihe bụ ogige nke satellites kachasị eme ihe? Ihe niile satellites eji taa maka nkwukọrịta site na netwọk ụlọ ọrụ bụ GEO. Ngwa ndị bụ isi nke satellites ndị a bụ ihe ntụgharị aka na ọnụọgụ na ntinye aka.
Ufodu uru nke iji satellite orbital satellite (MEO) Ndị Satellites nke na-ajụ Earthbit dị elu dị n'etiti 10075 na 20150 kilomita. N'adịghị ka GEO (Geosynchronous Earth Orbit) ọnọdụ ọnọdụ ha gbasara elu adịghị edozi. N'ịbụ ndị dị elu, ọ dị mkpa ka satellite dị mkpa iji nweta mkpuchi zuru ụwa ọnụ, mana njedebe na-ebelata.
Nhazi nke satellites site na nzube ha ma obu Satellite. Satellite igwe. Satellites na-agagharị. Satellites telecommunication. Ndị agha Satellite na ndị nledo. Ham Satellite Satellite.
Isi ọrụ nke telivishọn Mee ka akara ngosi ụgbọelu ndị a natara maka mgbasa ozi dị na ala. Na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro nke sistemụ ụgbọelu iji zere nsogbu ndabichi
Ụfọdụ n'ime ihe owuwu nke satellite Igwe satịlaịtị nwere ụgwọ ọrụ na n'elu ikpo okwu. Ihe a na-akwụ ụgwọ na-agụnye antenna ndị na-enweta ma na-ebugharị, na nke ihe eletrọniki nke na-akwado nnyefe nke ihe ngosi ozi. Ikpo okwu mejupụtara usoro niile nke na-ekwe ka ụgwọ ọrụ ahụ rụọ ọrụ.
Igwe satirita bụ usoro dị mgbagwoju anya nke nwere obere usoro. Ụfọdụ n'ime ha ... Ihe nchịkwa Ihe Njikwa Ihe Nchịkwa na-eme ka ntụziaka ahụ dị na satellites mgbe nile. Usoro a na-eji censors (dịka anya), ya mere antenna satellite "na-ahụ" ebe ọ na-ezo. Igwe satịlaịtị nke na-eme nchọpụta sayensị chọrọ ka usoro nlekọta na-edozi karịa usoro nkwukọrịta. Iwu na usoro ndebe data Ndị usoro nchịkwa nke nhazi data na iwu bụ ndị na-ejikwa ọrụ nile nke ugboelu (ụbụrụ ụbụrụ). Usoro nkwuputa nke netwọk Usoro nkwukọrịta nwere transmitter, onye nata, na ọtụtụ antenna iji jigharịa ozi dị n'etiti etiti na ala. Njikwa ala na-eji ya eziga ntuziaka ọrụ na kọmputa satịlaịtị. Usoro ihe a na-eziga foto na data ndị ọzọ nke satellite weghaara ndị injinia n'ụwa. Ngwá Ọrụ Ike Ọ bụla ndị ọrụ satellites chọrọ ike iji rụọ ọrụ. Anyanwụ na-enye ike ka ọtụtụ satellite na-agagharị na orbit gburugburu ụwa. Usoro a na-eji ihe osise anyanwụ iji mee ka ọkụ eletrik si n'ìhè anyanwụ, batrị iji chekwaa ike, ma kesaa ya na ngwá ọrụ na satellite. Ejighị ụgwọ ọrụ nke ụgwọ ọrụ bụ ngwa ngwa niile nke satịlaịtị kwesịrị ịrụ ọrụ ya. Ọ dị iche maka ozi ọ bụla. Igwe ekwenti ekwesiri igosi otutu ihe ngosi antenna iziga TV ma obu Nbudata ekwentị. Igwefoto dijitalụ iji nweta foto nke ụwa chọrọ igwe foto di iche iche n'elu ụwa.
Ọdịnihu na mmepe nke satellites A na-atụ anya mmepe nke satellite satellite, nke ga-enwe ihe nhazi ngwa ngwa nke e tinyere na satịlaịtị n'onwe ya, ọ ga-eme ka ihe ngosi ụgbọelu ahụ dị elu. Njikọ anya ikuku satellite, nke ga-ebelata oge mgbasa oge n'etiti njikọ ebe ọtụtụ satellites na-emechi. Ojiji nke elu dị elu (30 / 20 Ghz na 50 / 40 Ghz.); Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị a na-akpata nsogbu nkwụsịtụ dị elu, karịsịa n'ihi mmiri ozuzo.
Ọdịdị nke Satellite:
Arịrịọ anyanwụ Ngwá ọrụ anyanwụ bụ nnukwu akụkụ nke ọtụtụ puku igwe nchara. Ụlọ nke ọ bụla na-eji eletrik si na ìhè anyanwụ. Mgbe mkpụrụ ndụ ndị a jikọtara ọnụ, ha na-emepụta ikike dị ukwuu nke ga-agbanye ihe satịlaịtị na ịhapụ batrị satịlaịtị.
Thermal Blanquet Ihe mkpuchi a na-ahụ maka ya bụ akụkụ nke njedebe na-edozi ahụ. A na-eme blanket ahụ site na ihe dị mkpa nke na-ekpuchi satellite dum, ma na-arụ ọrụ ndị a: ọ na-eme ka satellite dị ọkụ site na oyi na oyi na okpomọkụ. A na-ekpughe satellite na oyi na-ekpo ọkụ nke ukwuu (-120 ka + 180). Na-enweghị ákwà mkpuchi ahụ, ekwesiri ike iji mepụta ihe.
Batery Batrị bụ akụkụ nke usoro ike. Zọpụta ike eletrik nke ihe igwe na-eme ka ọ nwee ike iji ya rụọ ọrụ na kọmputa.
Nrụgharị Bus Nke a dị mkpa nke satịlaịtị bụ ihe kpuchie ya. A na-ejikarị bọs na-emepụta nke ọma na nke na-eguzogide ọgwụ nke ga-adị ike iji kwado akụkụ ndị ọzọ, ma ọ bụghị nke dị oke arọ ka e wee ghara ịdọrọ satellite ahụ na orbit.
Ndị na-agụ kpakpando Ndị na-achụ kpakpando ahụ bụ akụkụ nke usoro ịchịkwa. Ha bụ obere telescopes nke chọrọ ohere ma gụọ ọnọdụ nke kpakpando. Ndị satellites na-eji ọnọdụ nke kpakpando ịnyagharịa, dịka anyị na-eme n'ụwa.
Ebugharị na-arụ ọrụ Igwe mmeghachi omume ahụ bụkwa akụkụ nke usoro ihe nchịkwa. Ndị a na-atụgharị satellite na ntụziaka dị iche iche. Ike ya na-eme ka satịlaịtị na-aga ma na-ezo aka na ntụziaka kpọmkwem.
I / O Nhazi Nhazi usoro mmepụta ihe bụ akụkụ nke data na ikikere usoro iwu. ha na-achịkwa data data na na site na kọmputa ụgbọ elu.
Omni Antennas Antenna omni bụ akụkụ nke usoro mgbasa ozi. A na-eji ha ebufe ozi n'etiti ikuku satịlaịtị na ala.
Kọmputa mgbawa Kọmputa na-agba ọsọ bụ akụkụ nke data na ikikere usoro iwu. Nke a bụ ụbụrụ nke satellite nke na-achịkwa ọrụ niile na satellites.
Onye na-ekesa / nata Transmitter / receiver bụ akụkụ nke usoro nkwukọrịta. Mgbe satellites chọrọ izipu etiti na ala, transmitter ahụ gbanwere ihe oyiyi ahụ na ihe mgbaàmà nke a ga-ebute n'ala. Mgbe ndị injinia zipụrụ iwu na satellite, onye na-anakọta satellite na-anakọta mgbaàmà ma na-eziga mgbanwe na ozi nke kọmputa nwere ike ịghọta.
Akuku nke uwa Ọ na-agụnye ọdụ ụgbọ elu ụwa nile; a na - ejikọta ha na onye ọrụ njedebe site na netwọk nke ụwa, ma ọ bụ n'ihe banyere obere ọdụ, nke jikọtara ya na ngwa ọrụ ikpeazụ.